A tale of three islands | isbeddel
← Francis Fukuyama: Haasaawe taariikheed
Xaafaddii Jajabka lagu jab! →
Gaajo uunbay hadal hayaan. 2050-ka, ayay leeyihiin, 10 Bilyan oo ruux arladu ma quudin kari doontaa? Oo maxay u quudin kari weyday; Ilaahay maanu jirin oo aanu joogin? Maya, xitaa haddaanad ka eegin xagga iimaanka, waaqica ayaa caddaynaya in baadka dhulka dul yaal uu mar kasta aadanaha ku filan yahay. Mar ayayse cabsidu imanaysaa: waa marka uu aadunuhu leexiyo sidii qummanayd ee loo abuuray. Haddii uu isku dayo in uu beddelo tirada dhasha, awood xad dhaaf ah kaydsado, xoolo badan oo inta cid kale laga dhaco la urursado, isku xoog sheegad iyo is baabi’in diin iyo xadaarad ku salaysan iyo is ictiraaf la’aan ama is maamuus la’aan aan dabada la kala qarsan. Haddii taa laga badbaado; xusulladaa subag laga leefi…taako kasta oo arlada ka mid ah.
Isha mari qoraalkan qiimaha badan:
Read the rest from: http://www.economist.com/node/21533364
Posted by Warfaa on Oktoobar 27, 2011 in Uncategorized